Ku deeq baabuur - BullyingCanada
Nagu Taageer. Badbaadi nolosha
Taageeradayada muhiimka ah waxaa awooday deeq bixiyayaasha adiga oo kale.
Waxaad u rogi kartaa gaarigaaga aadan rabin deeq deeqsinimo ah si aad u taageerto cagajuglaynta Canada! Adigoo ku hadlaya magacayaga, Ku Deeq Car Canada waxay aqbali doontaa gaadhigaaga ku-deeqidda - ordaya, ama maya. Hore ama mid cusub!
Ma jiro wax kharash ah oo adiga kugu kacaya, nidaamkuna aad buu u fudud yahay! Ku deeq Car Canada waxay fududayn doontaa dhammaan qaybaha ku-deeqidda gaadhigaaga laga bilaabo soo qaadista ilaa iibka ugu dambeeya, iyada oo hubinaysa in gaadhigaaga lagu iibin doono natiijada iibka ugu sarreysa ee suurtogalka ah. Dabadeed waxay noo soo gudbiyaan dakhliga saafiga ah annaga oo jooga Bullying Canada, waxaanan kuu soo dirnaa rasiidh cashuureed oo ah qiimaha baabuurka. Ka saar gaarigaas aan la rabin maanta!